किन महत्वपूर्ण छ अष्टांग आयुर्वेद ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeसमाचारकिन महत्वपूर्ण छ अष्टांग आयुर्वेद ?
आयुर्वेद चिकित्सालाई पपिन त्यसको विषयका हिसाबले आठ अलग-अलग भागमा विभाजन गरिएको छ । यी आठ भागको सम्मिलित रुपलाई ‘अष्टांग आयुर्वेद’ नाम दिइएको छ । यी प्रत्येक शाखालाई विस्तारमा जानौं ।
Previous articleबेनीमा चन्दा संकलनबाटै सभाहल निर्माण
Next articleगोवर्द्धन पूजाको इतिहास, किन दिइन्छ ५६ भोग ?